jeudi, 04 novembre 2021 20:12
Salon International de l'Habitat : Tanterahina mandritra ny hefarana etsy Tanjombato
Nisokatra nanomboka androany ary haharitra efatra andro etsy amin'ny Forello Expo Tanjombato ny Salon International de l'Habitat andiany fahatelo.
Anisany nivoitra nandritra ny fanokafana ity hetsika ity teny Tanjombato, androany ny nanambaran’ny Sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana, Andriamanohisoa Gérard, fa misokatra ny fisoratana anarana ho an’ireo izay maniry ny hisitraka ny trano fonenana sahaza « logements sociaux ».
Afaka misoratra anarana amin’ny tranokalan’ny ANALOGH www.analogh.mg ireo maniry hisitraka ny trano fonenana sahaza.
jeudi, 04 novembre 2021 12:41
Antsalaka - Antsiranana II : Mpivady novonoina tamin'ny fomba feno habibiana
Nanomboka tamin'ny 21 oktobra 2021 no nahatsikaritra ny tsy fahitana azy ireo tao Morafeno ny fianakaviany. Ny harivan’io dia tonga nampandre ny zandary ao amin’ny Poste Fixe Antsalaka.
Ny apitson’io dia roso ny fikarohana, hay nalevin'ireo tsy matahotody tamina lavaka efa ho 30 metatra izy mivady.
Efa andalam-pahasimbana ny razana. Tamin’ny fizahana nataon’ny dokotera no nahitana fa nisy ratra, izany hoe novonoina aloha, avy eo nodorana, dia nototofana fotaka taorian’izay.
Ny alika nompian'izy mivady nihaodihaody tsy nety niala teo amin'ny manodidina ilay lavaka no nahalalana fa tao no nandevenana azy ireo.
Very ny akoho aman-jatony sy vary akotry tamin'ny bidon maromaro an'izy mivady ireto.
jeudi, 04 novembre 2021 12:40
4 novambra : Tsiaro an’i Didier Ratsiraka
Mitsingerina amin’ity androany 4 novambra ity ny andro nahaterahan’ny Amiraly Didier Ratsiraka. Teraka tao Vatomandry ny 4 novambra 1936, ary nodimandry teto Antananarivo ny 28 martsa 2021.
Ho fahatsiarovana azy dia misy androany ny fotoam-pivavahana tao amin’ny Chapelle Saint Michel Amparibe, fametrahana voninkazo eny amin’ny Mausolée ilevenany ary hetsika fitadiavam-bola amin’ny alalan’ny fiaraha-misakafo ho fanohanana ny Fondation Céline et Didier Ratsiraka.
Filoha mpanorina ny antoko Arema izy. Filoham-pirenena teo aloha, nitondra teo anelanelan’ny 15 jona 1975 ka hatramin’ny 27 martsa 1993. Niverina teo amin’ny fitondrana indray ny 9 febroary 1997 ka hatramin’ny 5 jolay 2002.